Google na-aga n'ihu na nzuzo site na iji ngwa nchọta ya | Gam akporosis
La nzuzo na ozi nchedo nke ndị na-eji ekwentị mkpanaaka anọwo na ajụjụ ọ bụla kemgbe ha rutere. Ọtụtụ ndị ọrụ egosiwo nchegbu banyere ọgwụgwọ ndị nrụpụta na ndị nrụpụta mere gbasara ozi nkeonwe anyị. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ndị buru ibu dịka Apple gosipụtara mgbe niile (ọbụlagodi maka gallery) mkpebi siri ike megide adịghị ike nke data njirimara.
Google na-arụ ọrụ na gam akporo nwere nchebe karị ruo ọtụtụ afọ maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ ọ na-agbakwunye. Maka nke a ọ bụ na mmepe zuru oke nke ọrụ mgbochi nsuso nke ahụ ga-echebe ndị ọrụ gị gburugburu ụwa imegide ngwa na dubious ebumnuche. Isi echiche, amachi nchikota data site na ngwa mepụtara site na ndị ọzọ na mejuputa nzuzo na uto nke onye ahia obula.
Google na-aga n'ihu ịkụ nzọ na nzuzo na gam akporo
Mgbe anyị na-ekwu maka nnukwu teknụzụ, atụnyere ihe enweghị atụ. Apple na-arụ ọrụ ogologo oge na-arụ ọrụ na nzuzo nke ngwa ya Ọ na-egbochi ebumnuche ọjọọ nke ndị mmepe. N'ihi Ngosipụta Nchọpụta Ngwa, mmadụ niile ndị mmepe bu n'obi ibinye data ma obu ozi n'aka ndi oru ha nwere or u ime ka ha mara n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na ngwa ahụ n'onwe ya.
Google Agaghị m agabiga na nke a, mana na-arụ ọrụ na ọsọ zuru oke na-etolite ha iji mejuputa ọrụ yiri ya na gam akporo. N'ime ebumnuche ndị ọzọ, a ga-enwe kwe ka ndị ọrụ kpọsaa mgbasa ozi na ụzọ ọzọ ma obughi ndi mmadu. Ihe na mgbe ụfọdụ iru ala na-enye mmetụta nke ịbụ nnọọ "na-achịkwa." Site na nkwupụta, Google na-ekwu na ọ na-anwa ịchọta tan mgbagwoju anya itule n'etiti mgbasa ozi so na Ngwa na ọkwa nzuzo dị elu Maka ndị ọrụ.
Knowingmara na Google na-arụ ọrụ iji nye anyị gam akporo nke na-enye ahụmịhe onye ọrụ dị nchebe mgbe niile bụ ozi ọma. Ma ọ na-eche ihu ọrụ nke na-adịchaghị mfe ma ọlị. Nnukwu onye nyocha ga-anwa ịnye sistemụ arụmọrụ gam akporo ebe obe-ngwa nsochi na nchịkọta data nwere oke oke. Y hapụ onye ọrụ n'onwe ya setịpụrụ oke ọ dị mkpa maka ahụmịhe dị nchebe karị. Ì chere na nke a kwere omume taa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-aga n’ihu na nzuzo site na iji ngwa nchọta ya
You maraworị ụlọ nkwari akụ?, Netwọkụ mmekọrịta nke ozi ọdịyo